Wednesday, February 24, 2021 Tọzdee, Machị 24, 2022 Douglas Karr
Archives - ha nwere ọtụtụ saịtị n'ime afọ iri gara aga ya na odi iche putara ihe na saiti URL ha. Mgbe anyị nwalere njikọ peeji nke ochie, ha bụ 404'd na saịtị ha kachasị ọhụrụ.
Iji mee ka nkọwa dị mfe maka ndị ahịa na azụmahịa, ana m eme ka ha mara na engines ọchụchọ index peeji ma hazie ya na mkpirisi ederede site na ọdịnaya dị na ibe ahụ. Agbanyeghị, ha n'usoro peeji nke dabere na ewu ewu ya - nke a sụgharịrị na backlinks na saịtị ndị ọzọ.
Ozi ọma ahụ bụ na backlinks na saịtị nwere ikike anaghị agwụ agwụ! Dika anyi wuru saiti ohuru maka ndi ahia ma hazighara uzo ochie na ihe ohuru… anyi lere ihu akwukwo a na elu elu peeji nke ihe nchoputa njin ọchụchọ (SERP).
Ọ bụrụ na ịnwe ụlọ ọrụ na-elekwasị anya na okporo ụzọ ọchụchọ okporo ụzọ gị (yana KWES websiteR website websitelọ ọrụ webụsaịtị ọ bụla kwesịrị ịbụ) ma ọ bụ ọ bụrụ na ịnwere onye ndụmọdụ SEO nke arụghị ọrụ a, ekwenyere m na ha bụ ndị na-eleghara ọrụ ha anya. Nchọgharị ọchụchọ na-anọgide na-abụ isi mmalite okporo ụzọ maka atụmanya ndị dị mkpa na ebumnuche ịzụta.
Ya mere, na na… ma ọ bụrụ na ị na-redesigning gị na saịtị, hụ na ị na-na-eme na auditing na redirecting gị okporo ụzọ ọhụrụ peeji nke ọma. Ma, ọ bụrụ na ị naghị agbanwegharị saịtị gị, ị kwesịrị ị na-enyocha ibe 404 gị ma na-edegharị ha nke ọma!
IHE: Ọ bụrụ na ịgaghị ịkwaga na saịtị ọhụrụ, ịnwere ike ịwụli ozugbo na Stepkwụ na 5kwụ 404 na usoro a iji nyochaa ma degharịa peeji XNUMX.
Nzọụkwụ ọzọ bụ inyocha ọdịnaya ha ma chọpụta otu anyị nwere ike isi dị mfe ma wuo ya Ọbá akwụkwọ ọdịnaya a haziri nke ọma ma hazie na saịtị ọhụrụ ahụ. Imirikiti oge, m na-ewu peeji efu na ederede WordPress ka m wee nwee nyocha maka mmecha mechara maka ndị edemede na ndị nrụpụta m ịrụ ọrụ.
Enwere m ike inyocha URL na akụ ochie dị ugbu a iji weghachite peeji ndị ahụ ka ọ dịrị mfe iji hụ na m nwere ọdịnaya niile dị mkpa ma ọ nweghị ihe na-efu na saịtị ọhụrụ ahụ dị na saịtị ochie.
Ọ bụrụ na anyị nwere ike ime ka usoro URL dị mfe ma gbalịa idobe ibe na biputere slugs dị nkenke ma dị mfe, anyị na-eme. Achọpụtala m na afọ na mgbe redirects na-eche ida ụfọdụ ikike… njikarịcha nke ha draịva mụbara njikọ aka, nke sụgharịrị ka mma ogo. Jọ anaghịzi atụ m redirect peeji nke dị elu gaa na URL ọhụrụ mgbe ọ nwere ezi uche. Mee nke a na mpempe akwụkwọ!
Njikwa Nchọta Google - ozugbo emepere saịtị ọhụrụ ahụ, ị ​​ga-achọ ịnyefe saịtị XML ma lelee otu ụbọchị ma ọ bụ karịa iji hụ ma enwere nsogbu ọ bụla na saịtị ọhụrụ ahụ.
Dịka ọmụmaatụ, anyị bidoro saịtị maka ọtụtụ ebe Dentist bụ ọkachamara na ụmụaka nwere Medicaid mkpuchi. Otu n'ime peeji ndị anyị matara nke nwere backlinks na-ekpuchighi bụ akụkọ, Ezé 101. Saịtị dị adị enweghị isiokwu ahụ. Ngwaọrụ Wayback nwere naanị ihe edemede. Ya mere, mgbe anyị malitere saịtị ọhụrụ ahụ, anyị jidere n'aka na anyị nwere isiokwu zuru ezu, ihe ọmụma, na ihe osise na-elekọta mmadụ na redirects site na URL ochie gaa na nke ọhụrụ.
Ozugbo anyị bidoro saịtị ahụ, anyị hụrụ na okporo ụzọ ntụgharị na-agazi na ibe ọhụrụ ahụ site na URL ochie ndị ahụ! Peeji ahụ bidoro bulie ụfọdụ ọmarịcha okporo ụzọ yana ogo ya. Anyị emebeghị.
Ugbu a, peeji ahụ bụ peeji nke # 8 kachasị ahịa na saịtị ọhụrụ n'ime otu izu nke ịmalite. Ma enwere peeji 404 n'ebe ahụ ruo ọtụtụ afọ mgbe ọ bụla onye ọ bụla bịara! Ọ bụ nnukwu ohere tụfuru nke a na-agaghị achọta ma ọ bụrụ na anyị akpacharaghị anya banyere ijigharị na nyochaa njikwa njikọ ochie dị na webụ gaa na saịtị ha.